3 Amathrendi Wobuchwepheshe Abathengisi Okufanele Babuke Kuwo 2015 | Martech Zone
3 Amathrendi Wobuchwepheshe Abathengisi Okufanele Babuke Kuwo ngo-2015
NgoLwesithathu, Januwari 7, 2015 NgoLwesibili, Januwari 6, 2015 Douglas Karr
Idatha isakazeka kumakhasimende akho njengamanje… ivela kumafoni abo, izinkundla zokuxhumana, ideskithophu yomsebenzi wabo, amaphilisi abo, ngisho nezimoto zabo. Akubambezeli. Ngisanda kuvakashela ikhaya lethu lomndeni eFlorida lapho sithuthukise khona uhlelo lwama-alamu asekhaya.
I-alamu ixhunywe nge-Intanethi futhi uma i-Intanethi ingasebenzi, ixhumeka ngoxhumano lwangaphakathi olungenantambo (nebhethri uma amandla elahlekile). Uhlelo luhlelelwe ukuthola nokumemeza yonke iminyango, iwindi noma ngabe umnyango wegaraji uvulekile. Singayilawula futhi konke kusuka kuma-Smartphones ethu.
Amakhamera axhunywe nge-DVR eku-inthanethi nangesicelo seselula engingabheka emini noma ebusuku. Ukusuka e-Indiana, ungaya endlini, futhi ngiyakubona bese ucisha i-alamu noma uvule umnyango usuka e-Indiana. Egalaji kuneFord entsha ene-Sync system, edlulisa ukuxilonga kumthengisi futhi ixhunywe kuhlu lomculo lukaMama wami nohlu loxhumana nabo.
Umama wami une-defibrillator esifubeni sakhe kanye nesiteshi ahamba kuso esidlulisela yonke imininingwane yakhe kuDokotela wakhe ukuze ayibuyekeze. Njengoba ngangimbuka enza lokho nje, nganginovalo oluphelele ngenani lamadivayisi ayesevele exhunywe futhi eshayela ama-megabyte wedatha nsuku zonke ngaphandle kwekhaya… ngaphandle kwanoma ngubani ngisho kwikhompyutha.
Kusho ukuthini kubakhangisi, noma kunjalo? Kusho ukuthi wonke umthengisi udinga thepha kudatha enkulu, yisebenzise ngempumelelo, futhi usebenzise imikhankaso eyenziwe ngezifiso ngokushesha ukukhulisa inani abanalo kumathemba abo nakumakhasimende. Leli zwe elisha lokuxhuma izinto ingumgogodla we-infographic yakamuva yeGoogle kuzindlela ezintathu zobuchwepheshe abathengisi abadinga ukuzibuka ku-2015.
Kusukela Cabanga ngeGoogle
Ekuqaleni konyaka, sonke sizama ukubikezela okuzayo. Yimaphi amathrendi azokwakha imboni? Yibuphi ubuchwepheshe abantu abazobamukela? Ngenkathi singenawo amabhola e-crystal, sinemininingwane yokusesha. Futhi njengeqoqo elikhulu lezinhloso zabathengi, kungaba i-bellwether enkulu yamathrendi. Sibheke ukuseshwa ku-Google futhi sacwaninga ngocwaningo lwemboni ukubona ukuthi yini empeleni okutholayo.
Amapulatifomu empilo axhunyiwe ayavela - I-Intanethi Yezinto ngokusemthethweni iyinto. Njengoba amadivayisi anda futhi eqala ukusebenza ndawonye, ​​izinto ezixhunyiwe zizoba amapulatifomu empilo yakho. Bazokusiza ngezinto ozenzayo nsuku zonke - kusuka kwezokungcebeleka kuya ekushayeleni ukunakekela ikhaya lakho.
Iselula ibumba ifayili le- I-Intanethi Yami - I-smartphone yakho iya ngokuqonda. Njengesikhungo sawo wonke la mapulatifomu axhumekile, ingasebenzisa idatha eningi ukudala umuzwa ongcono, owenzelwe wena uqobo. I- Inthanethi Things iba yi I-Intanethi Yami - konke kube lula impilo yakho.
Ijubane lempilo lishesha kakhulu - Ku-inthanethi noma kuvaliwe, manje sesingathola ulwazi, ukuzijabulisa, nezinsizakalo kumzuzu ngqo esiwufunayo. Lezi zikhathi ezisheshayo zokwenza izinqumo zenzeka njalo - futhi lapho sixhuma kakhulu, zizokwenzeka ngokwengeziwe.
Tags: 2015internet sezintoubuchwepheshe izitayelacabanga ngeGoogle
Kungani Ukumaketha Kwakho Kwe-B2B Kudinga Uhlelo Lwesixwayiso Sokuqala
Awulungile, Nazi Izizathu Ezi-4 Zokuthi Imithombo Yezokuxhumana Ithinte I-SEO
Feb 1, 2015 ngo-7: 24 PM
Ukuqonda okukhanyayo nezitayela zobuchwepheshe zekusasa. Ngiyavuma ukuthi iselula ne-intanethi yezinto ngamaqiniso amabili amakhulu sonke esidinga ukuwamukela ezweni lanamuhla lobuchwepheshe. Futhi yebo ijubane lempilo lihambe ngokushesha kunangaphambili. Sonke sifuna imininingwane edingekayo ngesikhathi esifanele… futhi siyayithola ikakhulu.
Kimi, ama-Smartphones kanye nama-phablets yizona zinto ezibalulekile… wonke umuntu uzoba nekhompyutha (ish) ephelele egcwele ezandleni zakhe eminyakeni embalwa edlule…